Nilaza Ny Mpanao Fihetsiketsehana Fa Mandrisika Ny ‘Vono Olona Noho Ny Fiarovam-boninahitra” Ny Lalàna Jordaniana Ka Tsy Maintsy Ovaina · Global Voices teny Malagasy
Nilaza Ny Mpanao Fihetsiketsehana Fa Mandrisika Ny ‘Vono Olona Noho Ny Fiarovam-boninahitra” Ny Lalàna Jordaniana Ka Tsy Maintsy Ovaina
Voadika ny 18 Febroary 2017 6:08 GMT
Mpanao fihetsiketsehana milamina ao ivelan'ny Parlemanta ao Amman mba hitaky ny fanafoanana ny Andininy faha-340 ao amin'ny Fehezan-dalàna Famaizana. Sary avy amin'i Nora B.
Tamin'ny 1 Febroary 2017, nitangorona am-pilaminana teo anoloan'ny parlemanta Jordaniana ao amin'ny distrikan'i Abdali ao Amman ny vondrona mpanao fihetsiketsehana miisa 25-30 eo ho eo hitaky ny fanafoanana ny Andininy faha-340 amin'ny Fehezan-dalàna Famaizana Jordaniana, izay ahafahan'ireo mahavita “vono olona noho ny fiarovam-boninahitra” hahazo fanalehafan-tsazy. Nanatrika ny fihetsiketsehana i Nora B ato amin'ny Global Voices’.
Ilay antsoina hoe famonoana olona noho ny fiarovam-boninahitra dia hetsika valifaty mamono olona ataon'ny lehilahy anatin'ny fianakaviana amin'ireo vehivavy anatin'ny fianakaviana izay hita fa nandoto ny anaran'ny fianakaviana. Tamin'ny taona 2016, 26 ireo tranga vono olona noho ny voninahitra tao Jordania, mihoatra ny sivy raha oharina tamin'ny taona 2015. Ny anton'izany vono olona izany dia mety hoe firaisana ara-nofo alohan'ny fanambadiana na fananana finday miafina tsy fantatry ny fianakaviana.
Ahafahana mahazo fihenan-tsazy ho an'ny vono olona noho ny voninahitra ny andininy faha-340 sy ny 98 amin'ny Fehezan-dalàna Famaizana, milaza ny andininy faha-340 fa na iza na iza mahita ny vadiny na vehivavy havany ao anatin'ny fijanganjangana dia mahazo fanalefahan-tsazy raha mamono azy sy/na ny sakaizan'ilay vehivavy.
Ahafahan'ireo meloka tamin'ny vono olona noho ny voninahitra mahazo sazy malefaka ihany koa ny andininy faha-98, hoy ny voalaza, “Na iza na iza mahavita heloka noho ny hatezerana mafy izay vokatry ny hetsika tsy azo hamarinina sy mampidi-doza nataon'ny niharam-boina, dia mahazo famelan-keloka fanalefahan-tsazy.” Mety ho malefaka enim-bolana na latsaka izany ny sazy raha manapa-kevitra hanaisotra ny fiampangana ny fianakavian'ny niharam-boina, araka ny hita tamin'ny tranga vehivavy bevohoka nokendain'ny anadahiny ho faty tamin'ny taona 2007 rehefa nilaza ny marina taminy fa bevohoka dimy volana tamin'ny zanaky ny vadiny taloha izy, na ny tranga iray, izay lehilahy iray no namono ny anabaviny nisara-panambadiana tamin'ny taona 2003 noho ilay anabaviny tsy hita tao an-tranom-pianakaviana nandritra ny herinandro.
Nisy ireo fikasana taloha hanafoana ny lalàna tao amin'ny parlemanta, saingy tsy nisy nahomby, fa kosa, natao fanitsiana izany tamin'ny taona 2001 mba hanomezana zo momba ny fanalefahan-tsazy ho an'ny vehivavy ihany koa. Na izany aza, mihatra amin'ny trangam-pamelezana na famonoana vady ihany ny fanovana, fa tsy mihatra amin'ny anadahy na fianakaviana, kanefa milaza ny lalàna fa afaka mahazo fanalefahan-tsazy ny lehilahy raha mamono ny vadin'izy ireo na vehivavy havana. Hatramin'izao, vehivavy hatrany ireo lasibatry ny vono olona noho ny voninahitra ao Jordania.
Mpanao fihetsiketsehana milanja sora-baventy mivaky hoe, “Manomboka amin'ny fanafoanana ny Andininy faha-340 ny fanovana.” Sary avy amin'i Nora B.
Nokarakarain'i Esraa Tayseer Kudair, 17 taona, tamin'ny anaran'ny vondrona antsoina hoe “Miova Aho” ny fihetsiketsehana. Mpianatra sekoly ambony tia mampandroso ny satan'ny vehivavy ao amin'ny firenena i Esraa, manomboka amin'ny fanafoanana ny Andininy faha-340. “Misy ireo vehivavy voavono kanefa tsy nanao fahadisoana, ary mampiasa ity lalàna ity ny olona mba hanamarinana ny famonoana ireo vehivavy ireo,” hoy izy tamin'ny Global Voices.
Esraa Kudair, mpikarakara ny fihetsiketsehana milamina, mitaky ny fanafoanana ny Andininy faha-340. Hoy ny vakin'ny sora-baventy eny an-tanany:, “Mamela ny vono olona sy mandrisika izany ny Andininy faha-340 amin'ny lalàna.” Sary tany amin'i Nora B.
Ny sasany amin'ireo teny faneva amin'ny sora-baventy amin'ny fihetsiketsehana dia mivaky hoe: “Mamela ny famonoana olona sy mandrisika izany ny Andininy faha-340″, “Vonoy izy, ho voaro ianao,” “Heloka ny fanamarinana heloka,” “Tsy misy voninahitra amin'ny famonoana,” ary “Manomboka amin'ny fanafoanana ny andininy faha-340 amin'ny Fehezan-dalàna Famaizana Jordaniana ny fanovana.”
Nitodika tany amin'ireo mpikambana ao amin'ny parlemanta tamin'ny fotoana nivoahan'izy ireo tao amin'ny lapan'ny parlemantera i Feras Awad, mpianatra master ao amin'ny Sampana Vehivavy ao amin'ny Anjerimanontolon'i Jordania izay tonga nanatrika ny fihetsiketsehana: “Mampiseho fahazoan-dalana hamono olona ity andinin-dalàna ity, ka mamela ny famonoana ny vehivavy satria hoe vehivavy fotsiny izy ireo, “hoy izy tamin'ny alalan'ny fanamafisam-peo. “Niova ny fotoana sy ny toe-javatra: tsy nety izany, ary tsy mety amin'izao fotoana izao.”
Nanatona an'ireo mpikatroka tamin'ny toerana samihafa ny mpikambana roa tao amin'ny parlemanta. Niresaka tamin'ny vahoaka i Al-Zabn ary namaly fanontaniana, hoy izy: “Tsy maintsy raisintsika ho tompon'andraikitra ny mpamono olona, manohana anareo zahay. Miaraka aminareo aho amin'ny maha mpikambana ao amin'ny parlemanta, tahaka ny namako ianareo. Miasa momba izany izahay ankehitriny. “Nanome ny antsipirahan'ny fifandraisan'izy ireo tany amin'ireo mpikarakara ny fihetsiketsehana ny mpikambana ao amin'ny parlemanta ary nandrisika azy ireo mba hifandray sy hanaramaso, nilaza ihany koa i Al-Nuaimat fa hanatrika ny fotoam-pivoriana manaraka ny solontena roa avy amin'ny vondrona.
Mpikambana ao amin'ny parlemanta Suleiman Huwailah al-Zabn miresaka amin'ireo mpikatroka. Sary tany amin'i Nora B.
Zavatra iray ny ady amin'ny lalàna, saingy mbola mampanahy ny toe-tsaina ara-kolontsaina momba ny vono olona ho fiarovam-boninanitra. Tamin'ny taona 2013, nampiseho ny fanadihadiana natao tamin'ireo mpianatra taona faha-sivy miisa eo amin'ny 850 tao amin'ny renivohitra Amman fa eo amin'ny 40% amin'ny ankizilahy sy 20% amin'ny ankizivavy no mihevitra fa afaka hamarinina ny vono olona noho ny voninahitra. Miezaka manova izany toe-tsaina izany sy ny lalàna ny “Miova Aho”. “Ny Miova Aho dia vondron'olona nivorivory noho ny antony hiarovana ny vehivavy amin'ny vono olona noho ny voninahitra sy hampianatra ny olona momba izany olana izany,” Hoy i Esraa tamin'ny Global Voices. Nilaza izy fa raha mahomby ity hetsika ity, mety hiasa amin'ny tetikasa fanovana hafa ao amin'ny fanjakana indray ny Miova Aho.
19 ora izayKaraiba